YEYINTNGE(CANADA): Thursday, December 15
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးလွှတ် ချက်ခြင်းလွှတ်ပါ.
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတေးသံ by Sabai
စောင့်မျှော်နေတဲ့အမေများနှင့် ညီအကိုမောင်နှမများအတွက် ကိုဂျင်မီရဲ့တေးသံ.
စောင့်မျှော်နေတဲ့အမေများနှင့် ညီအကိုမောင်နှမများအတွက် by Sabai
ကိုမင်းကိုနိုင်သီဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးပါ. သူငယ်ချင်းများကလည်း ၀ိုင်းအားဖြည့်ထားပါတယ်...
Ko Paw's song by Sabai
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/15/20110အကြံပြုခြင်း
by Myit Makha Mediagroup on 15 Dec, 2011
မကြာခင်မှာ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ လွတ်တော်တွင်းမှာ Media Law ကို အဆိုတင်သွင်းပြီး အတည်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ဆက်တိုက်ကြားလာရပါတယ်။ လာမဲ့ ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း ကြားရပါတယ်။
Media Law ဆိုတဲ့အတွက် ကျမအနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစွာ ရင်ခုန်မိပါတယ်။ မီဒီယာ ဥပဒေ ဆိုတာက ကျမတို့ မီဒီယာသမားတွေ အတွက် ကောင်းခြင်းလား၊ ဆိုးခြင်းလား။ သတင်းသမားတွေကို ကာကွယ်ပေးတာလား။ သတင်းသမားတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့လား..ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ကျမ စဉ်းစားနေမိပါပြီ။
လွှတ်တော်တွင်းမှာ အဆိုတင်သွင်းမဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေကို ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ရေးဆွဲတာလဲ၊ မီဒီယာသမားတွေကော ပါဝင်ရေးဆွဲခွင့်ရမှာလား။ ပါဝင်ရေးဆွဲခွင့်ရမဲ့ မီဒီယာသမားတွေက ဘယ်သူတွေ ဖြစ်နိုင်မလဲ။ မီဒီယာ ဥပဒေကို နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ ဥပဒေဖြစ်တဲ့ Artical 19 ကို ကြည့်ပြီး ရေးဆွဲကြမှာလား။ ဘယ်လို ရေးဆွဲကြမှာလဲ။ပြည်တွင်းက ပညာရှင်တွေနဲ့တင် လုံလောက်ပါ့မလား။ အနည်းဆုံး အာစီယံအဆင့် ပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းမီ ရေးဆွဲမလား ဆိုပြီးတော့လည်း တွေးမိပါတယ်။
အဲဒီလို ကျမတို့ သတင်းသမားတွေအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေ ပါဝင်လာမလား။ မီဒီယာဥပဒေဆိုတာကတော့ သိပ်ကို ကျယ်ပြန့်နေမလား။ကျမ အတွက်တော့ မေးခွန်းတွေ ချည်းပါပဲရှင်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာလည်း မီဒီယာ ဥပဒေတွေ ရှိကြပါတယ်။ မီဒီယာ ဥပဒေတွေ အများစုကတော့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ လူသားတယောက်ရဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်ရေးဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားခွင့်ဆိုတာကိုတော့ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေတိုင်းမှ ပါဝင်တယ်လို့လည်း သိထားရပါတယ်။
ကျမတို့ သတင်းသမားတွေကတော့ မီဒီယာ ဥပဒေထဲမှာ နိုင်ငံသားတိုင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့် လျှောက်ထာနိုင်ဖို့ ဥပဒေ မျိုး၊ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဝေခွင့် ဥပဒေမျိုး၊ သတင်းသမားများပါဝင်သော သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုတဲ့ ဥပဒေမျိုးနဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတွေကနေ သတင်းအချက်အလက်တွေ ရယူပိုင်ခွင့် မေးမြန်းပိုင်ခွင့်ရမဲ့ Access to information law မျိုးကိုလည်း ပါဝင်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ကျမတို့ တိုင်းပြည်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေမှာ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ မီဒီယာ ဥပဒေမှာ သတင်းရယူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဥပဒေAccess to information law ရှိတယ်။ အဲဒီ ဥပဒေကြောင့် ပြည်သူတွေ သတင်းမှန်တွေ သိခွင့်ရတယ်လို့လည်း သတင်းကြီးလှပါတယ်။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေမှာလည်း မဖြစ်မနေ ပါဝင်သင့်တယ်လို့လည်း သတင်းသမားတွေက သုံးသပ်ကြတဲ့ ဥပဒေပါ။
Media law ဆိုတာ Media သမားတွေရဲ့ အကျိုး၊ ကာကွယ်ပေးဖို့ထက် ထိန်းချုပ်ဖို့ ဒုက္ခပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေလည်း ပါဝင်တတ်တယ်လို့လည်း အသံတွေ ကြားနေရပါတယ်။ သေချာတာကတော့ မီဒီယာ ဥပဒေကြောင့် မီဒီယာသမားတွေရဲ့ အနေအထားပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့လည်း ကြားနေရပါတယ်။
ကျမကို ကျမရဲ့ဆရာတယောက်က ပြောပါတယ်။ ၈ျာနယ်လစ်တွေကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ ဒုက္ခပေးနိုင်တာကတော့ Defamation နဲ့ပါတဲ့။ အသရေ ဖျက်မှုနဲ့ ဒုက္ခပေးကြတာ များတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အသရေဖျက်မှုလို ဥပဒေမျိုးကတော့ မီဒီယာ ဥပဒေထဲမှာ ထည့်သွင်းပါလာမှာလား။ ရာဇ၀တ်မှု အနေနဲ့ပါလာမလား၊ တရားမမှု အနေနဲ့ပါလာမှာလား ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ပုဒ်မ ၃၂၆ အရ သတင်းစာ ဆရာတွေကို ရာဇ၀တ်မှုမြှောက်သော အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲခံကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်နဲ့ ငွေဒဏ် ဘတ် ၂ သောင်းလို့လည်း သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ထိုင်းရှေ့နေကြီးတဦးက ပြောပြပါတယ်။
သတင်းရေးသားခြင်းကြောင့် တရားစွဲခံရတဲ့ သတင်းထောက်ကို သတင်းကြောင့် သိက္ခာအကျခံရတဲ့ တရားလိုက တရားစွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရာဇ၀တ်မှု မဖြစ်သင့်တဲ့အတွက် တရားမမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသင့်ပြီလို့လည်း ထိုင်းမီဒီယာလောကမှာ ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
` ဒီသတင်းတပုဒ်ကြောင့် ခင်ဗျားရဲ့ သိက္ခာကျခဲ့ရုံနဲ့ လူတယောက်ကို ထောင်ထဲ ထည့်မလို့လား၊ လျော်ကြေး ရရုံနဲ့ ပဲ ကျေနပ်သင့်တယ် လူတယောက်ကို ထောင်ထဲတော့ မပို့သင့်ပါဘူး `ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေနဲ့ ထိုင်းမီဒီယာလောက ကမေးမြန်းသံတွေ ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့လည်း ကြားသိရပါတယ်။
တစုံတယောက် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းသွားတဲ့အတွက် တရားစွဲကြတဲ့ သရေဖျက်မှု Defamation ကို သတင်းစာ ဆရာတွေက ဘယ်လို ကျော်လွှားကြပါသလဲလို့ ကျမက မေးမိပါတယ်။
`အသရေဖျက်မှုနဲ့ စွဲပြီး ရေးသားတဲ့ သတင်းက မှန်ကန်တယ်၊ သတင်းရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အများပြည်သူအကျိုးအတွက်၊ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ် ရေးသားတယ်လို့ တရားရုံးမှာ သက်သေပြနိုင်ရင်တော့ အသရေဖျက်မှု မမြောက်ဘူး` လို့ ဖြေပါတယ်။
ဒီလိုသာဆို ကျမတို့သတင်းသမားတွေကတော့ သတင်းတိုင်းကို သေသေချာချာနဲ့ လိုက်ဖို့ အချက်အလက်တွေကို တိတိကျကျ ရယူဖို့ ပိုအရေးကြီးလာပြီလို့လည်း မြင်မိပါတယ်။ ကျမတို့တတွေ သတင်းတပုဒ်ကို လ်ွယလွယ်နဲ့ ဖော်ပြတာမျိုးတွေ မလုပ်ကြဘဲ သတင်းထောက်နဲ့ အယ်ဒီတာ ပူးပေါင်းပြီး သေချာ စဉ်းစား စီစစ်ပြီးမှ ဖော်ပြကြမယ်။
ကျမတို့ သတင်းထောက်အနေနဲ့ သတင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကတည်းက သေသေချာချာရှိဖို့လိုတယ်။ သတင်းထောက်တွေရဲ့သတင်းကို အယ်ဒီတာတွေကလည်း သေချာ ဖတ်ရှု့ စီစစ်ပေးဖို့ လိုလာပါမယ်။
` ဂျာနယ်လစ်တွေအနေနဲ့ ကျင့်ဝတ်အတိုင်း ရေးမယ်၊ တိတိကျကျ သေသေချာချာ အလုပ်လုပ်မယ် နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်တယ်`လို့ တော့ သတင်းစာဆရာက အားတက်စရာ ပြောပါတယ်။
အသရေဖျက်မှု ကိစ္စကလည်း ကျမတို့သတင်းသမားတွေအတွက် ခေါင်းခဲစရာပါ။ သတင်းမှန် ဖော်ထုတ်ရေးသားတဲ့နေရာမှာ မရေးရဲအောင်၊ မဖော်ထုတ်ရဲအောင် လုပ်ချင်ကြသူတွေအတွက်တော့ အသုံးချစရာပါ။ ကျမတို့ သတင်းသမားတွေအတွက် အခြား ခေါင်းခဲစရာ ဘယ်လို ဥပဒေမျိုးတွေရှိနိုင်ပါသေးလဲ။
ကျမ သိရသလောက်ကတော့ တိုင်းပြည်တခု ၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်မှုကို တိုင်းတာတဲ့ နေရာမှာ မီဒီယာကို ကြည့်ပြီး တိုင်းတာလို့ ရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်က ရေးဆွဲထုတ်ပြန်တဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေကို ကြည့်ပြီး ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ စံကိုလည်း ခန့်မှန်းနိုင်ကြမှာပါ။
အဲဒီတော့ ကျမတို့ တိုင်းပြည်က ဘယ်လို မီဒီယာ ဥပဒေမျိုးကို ရေးဆွဲကြမလဲ ၊ တကယ့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဖြစ်ရဲ့လား ဆိုတာကိုလည်း အခြား အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေအပြင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကလည်း စောင့်ကြည့်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့။
ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ မီဒီယာ ဥပဒေ ထွက်လာပြီးရင်တော့ လက်ရှိအနေအထားထက် မီဒီယာလောကက ပိုမို ကောင်းမွန်ပွင့်လင်း လာမလား။ ပိုမို ဆိုးဝါးနိမ့်ကျသွားမလား ဆိုတာလည်း မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
သာမန်ပြည်သူ သတင်းသမားကျမ အနေနဲ့ကတော့ ဒီကြားထဲမှာတော့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေရဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေတွေနဲ့ အာစီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေတွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်ချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံရဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံရဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေတွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်ချင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေဟာ ကောင်းကောင်း၊ ဆိုးဆိုး သတင်းသမားဖြစ်တဲ့ ကျမတို့ကတော့ ရင်ဆိုင်ကြရမှာပါ။
by FNG on December 14, 2011
တရုတ် နိုင်ငံ တောင် ပိုင်း ဂွမ်ဒေါင် ပြည်နယ် မှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း တွေ အတွက် မြေ
တရုတ် အစိုးရက ဆန္ဒ ပြ နေတဲ့ မြို့ ငယ် လေး ကို ပိတ်ဆို့ ဖြတ်တောက်မှု တွေ ပြုလုပ် ထား ပြီး
ဦးဝင်းတင်နှင့် တင်ရေး၊ ၀င်ရေး၊ ပြင်ရေး၊ ထူထောင်ရေး (NLD နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်)
Interview with U Win Tin – တင်ရေး၊ ၀င်ရေး၊ ပြင်ရေး၊ ထူထောင်ရေး (NLD နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်)
ဒီတပတ် ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ မေးဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့ လက်ရှိပြည်တွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး၊ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး၊ မှတ်ပုံတင်ပြီး ပါတီပြန်လည်ထူထောင်ရေး စတဲ့ ကိစ္စများအပေါ်မှာ ၈၈ မျိုးဆက်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ တိုင်းရင်းသားများ၊ သံဃာတော်များနဲ့ ပါတီဝင်များ၊ ပါတီထောက်ခံသူများနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူများရဲ့ အမျိုးမျိုးသော သဘောထားများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြောဆို ထင်မြင်ချက်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ အင်န်အယ်ဒီပါတီက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ လုပ်တယ်၊ အဲသည်အပေါ်မှာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသော သဘောထားတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ မှတ်ပုံတင်မယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်။ ဒါကို လက်ခံကြိုဆိုကြတယ်။ တချို့ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတော် မလွတ်မြောက်သေးတဲ့အခြေအနေမှာ ဒါကို စဉ်းစားစေချင်တယ်။ တချိုကတော့လည်း ပါတီနဲ့အတူ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် နေရာပေးပါ။ သူတို့ကို အရေအတွက်တခုပေးပြီး အတူတူ ‘တင်’ ကြ၊ ‘၀င်’ ကြပါလို့ ပြောတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာတို့က ဘယ်လိုမြင်တွေ့နေရသလဲ။
ဖြေ။ ။ အင်န်အယ်ဒီမှာက ရွှေဂုံတိုင်ရပ်တည်ချက်ရှိတယ်။ ၂၀၀၉ ဧပြီမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပါ။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ လွတ်မြောက်လာသူတွေ ရှိသော်လည်း မလွတ်မြောက်သေးတဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်၊ ကျန်နေတယ်။ နောက်တခုက ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆိုတာ။ အဲသည်တုန်းက အနယ်နယ်က အင်န်အယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေ ၁၀၀ ကျော် စည်းဝေးပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာ။ ဒါက “လွှတ် / ပြင် / ၀င်” လို့ ပြောမလား။ ” ပြင် / ၀င်” လို့ ပြောမလား။ လွှတ်ပေးရမယ်၊ ပြင်ဆင်ရမယ်။ ဒါမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုဟာက ၀င်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ …”၀င် / ပြင်” ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီတော့ ပြင်/၀င်ဖက်ကနေပြီး ၀င်/ပြင်ကို မေးခွန်းထုတ်တာတွေ၊ စကားပြောဆိုတာတွေ ရှိနေတာပေါ့လေ။ အရင်က လွှတ်တော်တွေကို သပိတ်မှောက်မယ်လို့ ဆိုတဲ့ သဘောထားတွေ ရှိကြတယ်။ နောက်တော့ လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ ဒါက နိုင်ငံရေးရဲ့ ဖြစ်မြဲထုံးစံပဲ။ (Process)။ နောင်ကျရင်တော့ သမိုင်းမှာ ပြေလည်ရင်လည်း ပြေလည်သွားနိုင်မယ်။ မပြေလည်ရင်လည်း ဒီကိစ္စဟာ သမိုင်းမှာ မှားတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုတာ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးစရာ အရှည်သဖြင့်တခုလည်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
မေး။ ။ အဲသည်မှာ သဘောတခုက လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ အကြပ်အတည်းရဲ့ ပကတိကို ကြည့်ပြီး ‘၀င်/ပြင်’ သင့်သလား၊ ‘ပြင်/၀င်’ သင့်သလားဆိုတဲ့ အချိန်ကျ မကျကို ဆွေးနွေးနေကြတာမဟုတ်လား ဆရာ။ အခုဟာက အင်န်အယ်ဒီပါတီကိုယ်တိုင်က တခဲနက်တည်း ‘၀င်/ပြင်’ ကို ရွေးချယ်ထားပြီးပြီပဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောနေကြတာက ‘၀င်/ပြင်’ ဖက်ကဆိုရင်ပေါ့ကွာ။ အခုဆိုရင် အနှစ် ၂၀ ရှိပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ အချိန်ကို စောင့်နေကြဦးမှာလဲ။ နောက်ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က လွတ်မြောက်နေတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မှု ပေးနေတယ်။ သူ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ စည်းရုံးနိုင်မှု အင်အားကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်တယ်။ ဒါမျိူးတွေ ပြောကြတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာ တတိယအင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ၊ တပ်မတော်သားတွေ၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်တွေ၊ တစညလိုမျိူး ပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သဘောထားချင်း ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်လာပြီး ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေထဲက ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်လာနိုင်မယ်လို့ ပြောလာကြတာတွေ ရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အားကို ပွားယူနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုကြတာတွေ ကြားရတယ်။ မူလက ၁၀၊ ၂၀ လောက်ကနေ ၁၀၀၊ ၂၀၀ အဆဆ ပွားသွားမယ်လို့ ပြောကြတယ်။
မေး။ ။ အဲဒါက ‘၀င်/ပြင်’ တွေဖက်က ပြောတာပေါ့ဆရာရယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ သံဃာ့တော်တွေ၊ သံဃာ့ခေါင်းဆောင်တွေ လွတ်မြောက်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အဓိကထား ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ အဲဒါပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့်တယ်ပေါ့လေ။ ‘ပြင်/၀င်’တွေ ဖက်က ပြောဆိုတာတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ အခုတလောမှာ ၈၈ မျိုးဆက်တွေ၊ ဗကသကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၊ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုတို့ကလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မလွတ်မြောက်သေးလို့ သူတို့ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်သဘောထားကို မကန့်ကွက်ဘူး၊ လေးစားတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့နံမယ်သုံးပြီးတော့ မ၀င်ဘူးလို့ ထုတ်ပြန်တာတွေ ရှိလာတယ်လေ။ အဲဒါတွေကိ်ု ဆရာတို့ ဘယ်လိုမျိူး ရင်ဆိုင်နေရသလဲ။
ဖြေ။ ။ ၈၈မျိုးဆက်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ လူထုလူတန်းစားအသီးသီးရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူတွေ အများအပြားဟာ ထောင်ထဲမှာ ဖမ်းချုပ်ခံထားရဆဲဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အင်အားတွေ ဆောင်ရွက်မှုတွေ အားနည်းနေချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို အပြင်ကလူတွေ ၀င်ကြရင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေကြားမှာ သဘောထားတွေ ကွဲကြတာ၊ ညီညွတ်မှုတွေ ထိခိုက်ကုန်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရုန်းကန်မှုတွေမှာ အားလျော့သွားနိုင်တယ်။ အချင်းချင်းတွေကြားမှာ လမ်းခွဲကြီး တခုလို ဖြစ်သွားမယ်။ နောင်ကျရင် လွှတ်တော်ထဲက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို အာဏာရှင်တွေက လက်ကိုင်တုတ်သဖွယ် သုံးပြီးတော့ အပြင်ကဒီမိုကရေစီရေး တောင်းဆိုလှုပ်ရှားသူတွေကို တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်းတာတွေ လုပ်လာမယ်လို့လည်း ပြောဆိုကြ၊ ထင်မြင်ချက်ပေးကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ပြောတာကလည်း မှားတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူးလေ။ လက်ခံပြီး နားထောင်ပေးရပါတယ်။ ဒါကလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ ၂၀၀၉ ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာချက်ထဲက ‘လွှတ်/ ပြင်/ ၀င်’ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပဲလို့ ပြောရင်ရပါတယ်။
မေး။ ။ အခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ သဘောထားတွေနဲ့အတူ ဆရာတို့ရဲ့ပါတီပြင်ပမှာ ဘယ်လိုမျိူး နိုင်ငံရေးအင်အားတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ တွေ့ရသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော့်အမြင်ပြောရရင် “၈၈မျိုးဆက်” လို့ပြောရမယ့် နိုင်ငံရေးအင်အားစု ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ယခုထက်ထိ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဖမ်းချုပ်ခံထားရတဲ့ ၈လေးလုံးတွေ၊ အကျဉ်းထောင်ကနေ လွတ်မြောက်လာတဲ့ ၈၈တွေ၊ ပြီးတော့ အဲသည် ၈၈မျိုးဆက်တွေကို လိုလားတဲ့ ထောက်ခံတဲ့ အင်အားစုတွေဆိုပြီး သိသိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အဲသည် ၈၈မျိုးဆက်တွေထဲမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ရှိလာတယ်။ နောက်တခုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာကို လက်မခံဘူး၊ ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားလည်း ထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ဆုံးတခုကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၈၈အမည်ခံပြီး မ၀င်ဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာကိုလည်း ကန့်ကွက်ခြင်းမပြုဘူး၊ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားနဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကို ၀န်းရံပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားလည်း ထွက်ပေါ်လာတယ်။
မေး။ ။ ဒါတွေ ထွက်လာတာက ဆရာကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံကြားသိနေရတာပေါ့။ သူများတွေ ပြောဆိုနေတာကို တဆင့်အကြားသက်သက်နဲ့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ဖြေ။ ။ ကိုယ်တိုင်မြင်ရ၊ သိရတာတွေပါ။ ထောင်ထဲက သဘောထားတွေ ထွက်လာတယ်။ စာနဲ့ ပေနဲ့ ရေးသားကြတယ်။ ထောင်ပြင်က ၈၈ တွေကလည်း ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတာတွေ လုပ်လာကြတယ်။ ဒေါ်စုကို ထောက်ခံတယ်၊ မထောက်ခံဘူး ဆိုတာမျိုးကအစ ပြောကြ တင်ပြကြ ဆွေးနွေးကြတာတွေ ရှိတာကို မြင်တွေ့နေရတယ်။ အဲသည်မှာ နောက်ဆုံး အများစုရဲ့ သဘောထားက ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ ၈၈မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့က သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေ၊ သံဃာတော်တွေ၊ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ထောင်ထဲမှာ ရှိနေသေးသမျှမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ ချိတ်တွဲပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို မ၀င်ကြဘူးဆိုတဲ့ သဘောထား ကျသွားတယ်။ လိုင်းပြတ်သွားတယ်ပေါ့ကွာ။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ်ပြတ်သွားတဲ့ လိုင်းတခုကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်န်အယ်ဒီပါတီကိုတော့ ၀ိုင်းရံကြရမယ်ဆိုတာ အရေးကြီးတယ်။ အင်န်အယ်ဒီမှ ၀န်းရံပြီး အသွင်သဏ္ဍန်အမျိုးမျုိးရှိသော ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းတွေမှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားကြမယ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်။ တသီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ ပါတီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ကိုင်ကြတာတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတာတွေကိုလည်း ဘာမှ မှတ်ချက်ပေးစရာမလိုဘူးလို့လဲ သူတို့ဖက်က ရှင်းလင်းပေးလိုက်တယ်။ ဒါကတော့ ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ ၈၈ မျုိးဆက်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုရဲ့ ရပ်တည်ချက်၊ သဘောထားဖြစ်လာတာကို နောက်ဆုံးမှာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
မေး။ ။ ပြည်တွင်းမှာ ၈၈မျိုးဆက် နိုင်ငံရေးအင်အားစုအနေနဲ့က နောက်ဆုံးမှာ ‘၀င်/ပြင်’တွေ ‘ပြင်/၀င်’တွေ အခြားအချက်အလက်တွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲတို့၊ ပါတီမှတ်ပုံတင်တာတို့ကို အဓိကထား ပြောဆို ဆွေးနွေးနေကြတာထက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီကို အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတခုအဖြစ် အားလုံးက ၀န်းရံမယ်ဆိုတာမျိုး ဆုံးဖြတ်ချက်ကျသွားတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့၊ ဟုတ်လား ဆရာ။
ဖြေ။ ။ အဲလိုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲသည်လိုမျိူး အခြားသော ပြည်ပကဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းကဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေမှာလည်းပဲ အလားတူသဘောထားမျိူး၊ ရပ်တည်ချက်မျိုး လိုင်းကျသွားမယ်၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အချင်းချင်းတွေကြားထဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားကြမယ်။ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ မဖြစ်ပေါ်တော့ဘူး။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျဉ်းမှာလည်း ထိရောက်မှုတခုခုဖြစ်လာတော့မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
မေး။ ။ ဆရာကိုယ်တိုင်လည်း ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကို လက်ခံသူ၊ ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်နေရက်နဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီဝင်တဦးဖြစ်နေတဲ့အတွက် အများဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံပြီးတော့ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ၀င်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ ပြောရင်ရမလား ဆရာ။
ဖြေ။ ။ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့လည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးတွေ၊ ပါတီပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေမှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေရတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တရက်မှာတော့ ၈၈ မျိုးဆက်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစု လို့ ဆရာသုံးနှုန်းတာကို ဆက်ပြီး မေးမြန်းပါဦးမယ်။
ဖြေ။ ။ ကောင်းပါပြီ။ တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ။
Published on December 15, 2011 by ရွှေအောင်
အမျိုး ​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် အ​ထွေ​ထွေအတွင်း​ရေး​မှူး​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့​သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး​တို့​ ဒီက​နေ့​ ​တွေ့​ဆုံခဲ့​ကြပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာအတိုက်ခံ ​ခေါင်း​ဆောင်နဲ့​ တရုတ် အဆင့်​မြင့်​အရာရှိတို့​ ပထမဦး​ဆုံး​အကြိမ် ​တွေ့​ဆုံမှု ဖြစ်ပါတယ်။`
တရုတ် နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာန ​ပြောခွင့်​ရသူက​တော့​ ဒီလို ​တွေ့​ဆုံတာဟာ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ဘက်က ​တောင်း​ဆိုခဲ့​တာ​ကြောင့်​ ဖြစ်တယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။ ဘယ်မှာ ​တွေ့​ဆုံလဲဆိုတာကိုလည်း ​ပြောမသွား​ပါဘူး​။
အမျိုး​သား​ ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်က ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​ တရုတ် သံအမတ်တို့​ ​တွေ့​ဆုံမှုကို အတည်ပြု ​ပြောဆို​ပေမယ့်​ အ​သေး​စိတ်ထုတ်​ဖော်​ပြောဆိုတာခြင်း​ မရှိပါဘူး​။
အခုလို ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​ တရုတ်သံအမတ်တို့​ ​တွေ့​ဆုံတာဟာ မြန်မာ ဒီမိုက​ရေစီ အ​ပြောင်း​အလဲအတွက် တွန်း​အား​တခု ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား​ဆိုတာ အမျိုး​သား​ ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် လွတ်​မြောက်နယ်​မြေ နိုင်ငံခြား​ရေး​တာဝန်ခံ ကိုညိုအုန်း​မြင့်​ကို ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​ထား​ပါတယ်။
ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်အ​နေနဲ့​ အခုလို တရုတ်သံအမတ်နဲ့​ ​တွေ့​တာ ဘယ်လို အ​ကြောင်း​ကြောင့်​လို့​ ဖြစ်နိုင်လဲ။
“အဓိကက​တော့​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်အ​နေနဲ့​ ကျ​နော်တို့​ ဒီမိုက​ရေစီအင်အား​စု​တွေက ဒီတရုတ်ပြည်အ​ပေါ်မှာ သ​ဘောထား​ကို တချိန်လုံး​ ဒီ​ရေဒီယို​တွေ​ရော၊​ ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ​တွေမှာပါ ထုတ်​ပြော​လေ့​ရှိပါတယ်။ အခုဟာက ထူး​ခြား​တာက​တော့​ အခု တရုတ်ဝန်ကြီး​ချုပ် ဝမ်း​ကြား​ပေါင် ဗမာပြည်ကို မဲ​ခေါင်မြစ်ဝှမ်း​ဒေသ အစည်း​အ​ဝေး​ကို တက်မယ့်​အချိန်နဲ့​လည်း​ တိုက်ဆိုင်​နေတာကို ​တွေ့​ရပါတယ်။ အဓိကက​တော့​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်အ​နေနဲ့​ တရုတ်သံအမတ် က​နေတဆင့်​ တရုတ်​ခေါင်း​ဆောင်​တွေကို ဗမာပြည်မှာ ဒီမိုက​ရေစီ ဖွံ့​ဖြိုး​မှုက တရုတ်ပြည်အတွက် အန္တရာယ်မရှိနိ်ုင်ဘူး​ဆိုတဲ့​အချက်ကို အဓိက ​ပေး​ချင်တဲ့​ သတင်း​စကား​ ဖြစ်မယ်လို့​ ကျ​နော်ထင်ပါတယ်။”ဒေါ် ​အောင်ဆန်း​စုကြည် အရင် တရုတ်နဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ ​ပြောခဲ့​ဖူး​တာ​တွေက​တော့​ အိမ်နီး​ချင်း​ တိုင်း​ပြည်ဖြစ်တဲ့​အတွက်​ကြောင့်​ တရုတ်နဲ့​ဆက်ဆံ​ရေး​ ​ကောင်း​မွန်ဖို့​လည်း​ သူ လိုလား​ပါတယ်ဆိုတာမျိုး​လည်း​ ထုတ်​ပြောတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ တဖက်က တရုတ်​ခေါင်း​ဆောင်​တွေက​တော့​ ပြန်ပြီး​တော့​ အရိပ်အ​ရောင်​လေး​တောင် ​ပြောတာဆိုတာ မ​တွေ့​ရဘူး​။ အခုလို ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​ တရုတ်သံအမတ်နဲ့​ ​တွေ့​တယ်ဆို​တော့​ တရုတ်ဘက်က​ရော ဒီမိုက​ရေစီအင်အား​စု​တွေအ​ပေါ် အထူး​သဖြင့်​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​ အန်အယ်လ်ဒီကို​ပေါ့​နော် သ​ဘောထား​ ဘယ်လိုရှိလဲ။
“အဓိကက​တော့​ တရုတ်အစိုး​ရရဲ့​ ၂၀၁၀ ​ရွေး​ကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အထိက ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ နအဖ အစိုး​ရနဲ့​ပဲ ထိ​တွေ့​ဆက်ဆံသွား​မယ်ဆိုတဲ့​ သ​ဘောမျိုး​ကို ကျ​နော်တို့​ ​တွေ့​ရပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း​ အခုဒီအချိန်မှာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး​ ကိုယ်တိုင်က ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​ ​တွေ့​ဆုံဖို့​ သ​ဘောတူခြင်း​က ဗမာပြည်အ​ပေါ်မှာ ထား​တဲ့​ တရုတ်နိုင်ငံခြား​ရေး​မူဝါဒ ​ပြောင်း​လဲတယ်လို့​ ကျ​နော် ထင်ပါတယ်။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့​ တရုတ်အစိုး​ရရဲ့​ တချိန်တုန်း​က တဖက်သတ် နအဖ အ​ပေါ်မှာ ​ထောက်ခံခဲ့​တဲ့​ အစဉ်အလာ ရှိပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ၂၀၁၀ ​ရွေး​ကောက်ပွဲ အပြီး​မှာ​တော့​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်လို အမျိုး​သား​ခေါင်း​ဆောင် တဦး​အ​ပေါ်မှာ တရုတ်အစိုး​ရ အ​နေနဲ့​လည်း​ ထိ​တွေ့​ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာကို နား​လည်ပါတယ်။ ဒီအ​ပေါ်မှာလည်း​ ကျ​နော်တို့​ တချိန်လုံး​ ကြိုး​စား​ခဲ့​ပေမယ့်​ နိုင်ငံ​ရေး​ရဲ့​ အ​နေအထား​ ​ပြောင်း​လဲမှုနဲ့​ ပထဝီ နိုင်ငံ​ရေး​အ​နေအထား​ ​ပြောင်း​လဲမှု အတွက်​ကြောင့်​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ကို ဒီလို တရုတ်အစိုး​ရ သံအမတ်နဲ့​ ​တွေ့​ခြင်း​ ဖြစ်တယ်လို့​ ကျ​နော်ထင်ပါတယ်။”
သိပ်မကြာ ​သေး​ခင်ကပဲ အ​မေရိကန်-မြန်မာအထူး​သံကလည်း​ တရုတ်ကိုသွား​ပြီး​တော့​ မြန်မာပြည်နဲ့​ သူတို့​ ဆက်ဆံ​ရေး​ကို ချပြခဲ့​တယ်လို့​ သိရပါတယ်။ အဲဒီအကျိုး​ဆက်​တွေနဲ့​ အခုတရုတ်သံအမတ်​တွေ့​တာ​တွေနဲ့​ ​ပေါင်း​လိုက်ရင် တရုတ်အ​နေနဲ့​က ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည် ဦး​ဆောင်တဲ့​ ဒီမိုက​ရေစီ အင်အား​စု​တွေကို ပိုပြီး​တော့​ သိသိသာသာ​ပေါ့​ ​ထောက်ခံအား​ပေး​လာမယ့်​ လက္ခဏာများ​ ​တွေ့​ရလား​ဗျ။
“ကျ​နော့်​ အမြင့်​က​တော့​ အ​ပေါင်း​လက္ခဏာများ​တယ်လို့​ ထင်ပါတယ်။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့​ တိုင်း​ရင်း​သား​တွေနဲ့​ ကချင်​ဒေသမှာ ဖြစ်ပွား​ခဲ့​တဲ့​ ဇူလိုင်လ​လောက်မှာ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ရဲ့​ အိပ်ဖွင့်​ပေး​စာ အ​ပေါ်မှာလည်း​ တရုတ်အစိုး​ရက အများ​ကြီး​ ​ကျေနပ်တယ်ဆိုတာကို ကျ​နော်တို့​ သိရပါတယ်။ အဲဒီစာအ​နေနဲ့​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ရဲ့​ အပြုသ​ဘော ​ဆောင်တဲ့​ အမျိုး​သား​ရင်ကြား​စေ့​ရေး​အ​ပေါ်မှာလည်း​ တရုတ်အစိုး​ရက​နေပြီး​တော့​ ​ပြောင်​ပြောင်တင်း​တင်း​ မဟုတ်ရင်​တောင်မှ တဖက်တလမ်း​က​နေပြီး​တော့​ အကူအညီ​ပေး​နေတယ်လို့​ ကျ​နော်တို့​ ယုံကြည်ရပါတယ်။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့​ တရုတ်အစိုး​ရအ​နေနဲ့​ ဘယ်အစိုး​ရပဲ တက်တက်၊​ ဘယ်သူပဲ ​ခေါင်း​ဆောင် ​ခေါင်း​ဆောင် တရုတ်အစိုး​ရအ​နေနဲ့​ ဗမာပြည်မှာ ​ဆွေမျိုး​ပေါက်​ဖော် ချစ်ကြည်​ရေး​လို့​ သူတို့​ခေါ်တဲ့​ ဗမာပြည်အ​ပေါ်မှာ ပိုပြီး​တော့​ လွှမ်း​မိုး​နိုင်တဲ့​ နိုင်ငံခြား​ရေး​မူဝါဒကို သူတို့​ ထား​ရှိဖို့​ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့်​ ရှင်း​ရှင်း​ပြောရရင် သမ္မတကြီး​ဦး​သိန်း​စိန်နဲ့​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည် ​တွေ့​ဆုံပြီး​တဲ့​အချိန်မှာ တရုတ်အစိုး​ရအ​နေနဲ့​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ကို ​တွေ့​ဆုံဖို့​အတွက် တရုတ်ပြည်ရဲ့​ ကိုယ်စား​ပေါ့​နော် သံအမတ်ဆိုတာ တိုင်း​ပြည်ရဲ့​ ကိုယ်စား​ပြုပုဂ္ဂိုလ် တဦး​ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်​ကြောင့်​ ဒါဟာ အင်မတန်မှ အ​ရေး​ကြီး​တဲ့​ ​ခြေလှမ်း​တခုကို သူတို့​ စပြီလို့​ ကျ​နော်ထင်ပါတယ်။”
EU ကိုယ်စားလှယ်Robert Cooper နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေး
ကိုဝိုင်း | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၉ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဥရောပသမဂ္ဂ EU နိုင်ငံခြားရေးနှင့် လုံခြုံရေးရာ အကြီးအကဲ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ
ရောဘတ်ကူးပါး Robert Cooper နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကြာသပတေးနေ့က တွေ့ဆုံရာတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အစည်းဝေးတက်သူများထံမှ သိရသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဗဟိုရုံးချုပ်၌ မနက် ၁၀ နာရီမှစတင်ပြီး ၄၅ မိနစ်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ရာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPP အဖွဲ့ဝင်များလည်းပါဝင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံတချို့ ဖလှယ်ခဲ့သည်။
“ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ စောင့်ကြည့် လေ့လာမှု
တွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပါတယ်။ World Bank နဲ့ IMF တို့ရဲ့ အကူအညီက လိုအပ်တယ် ဆိုတာ လည်း ပြောပါတယ်” ဟု NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မစ္စတာကူးပါး၏ ယခုခရီးစဉ်သည် ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး
ဥရောပသမဂ္ဂ EU နိုင်ငံခြားရေးနှင့် လုံခြုံရေးရာ အကြီးအကဲ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ရောဘတ်ကူးပါး Robert Cooper
ဇွန်လ အတွင်းက အချက်အလက် ရှာဖွေရေး ခရီးစဉ် အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU အထူးသံ Piero Fassino နှင့်အတူ လာရောက်ခဲ့ဖူးသည်။
ယခုတွေ့ဆုံမှုအတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အလွန်အရေးပါကြောင်း လက်ခံထားကာ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံတိုင်းလည်း ယင်းကိစ္စအား ထည့်သွင်းပြောဆိုလေ့ရှိသည်ဟု မစ္စတာကူးပါးက ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းတွေ့ဆုံရာတွင်ပါဝင်သူဦးအုန်းကြိုင်က ပြန်ပြောပြသည်။
မစ္စတာကူးပါးနှင့်အတူ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအီးယူ သံအမတ် မစ္စတာ ဒေးဗစ် ရေမွန် လစ်မန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ် Mr Thierry Mathou နှင့် EU အာရှရေးရာ
ဌာနအကြီးအကဲ Mr Ceseamus Gellespie တို့လည်း တွေ့ဆုံမှုတွင် ပါဝင်ကြသည်။
CRPP အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က တိုင်းရင်းသားအရေး ကိစ္စများကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင် ပါတီများမှ ခေါင်းဆောင်များ အကျဉ်းကျဆဲဖြစ်သည့်အတွက် ပြန်လည် မှတ်ပုံမတင်ကြကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲ၌ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးသန်းထွန်း၊ ဦးလှဖေ၊ ဦးညွန့်ဝေ၊ ဦးအုန်းကြိုင်၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးဟံသာမြင့်၊
ဒေါ်မေဝင်းမြင့်၊ ဦးဝင်းမြင့်တို့နှင့် CRPP အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်၊ ဦးနိုင်ငွေသိန်း၊ ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်၊ ဦးရွှေကြူး၊ ဦးစိုးဝင်းတို့ တက်ရောက်ကြပြီး NLD ၏ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်များနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ
စီးပွားရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍မူ “IMF ရဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ အမြင်တွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ၊ သုံးစွဲမှုတွေနဲ့ အခြေအနေတွေ၊ အဲဒါကို Balance လုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ပိုအလေးအနက်ထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက သုံးသပ်သည်။
မကြာသေးခင်က လာရောက်ခဲ့သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စစ်ကလင်တန်၏ ခရီးစဉ် အတွင်းကလည်း
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စေလွှတ်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား
မစ္စတာကူးပါး၏ ယခုခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အပြင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က တွေ့ဆုံခဲ့သေးသည်။ ယင်းအပြင် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ
ကော်မတီဝင်တချို့နှင့် တွေ့ဆုံကာ နှစ်ဖက် ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရန်၊ စီးပွားရေး၊ ငွေကြေးပြုပြင်ရေးနှင့် ငွေပေးချေ စနစ်၊ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ကြာသပတေးနေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မစ္စတာကူးပါး၏ ဇွန်လခရီးစဉ်အတွင်းကမူ ဒုသမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနှင့်သာ တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့သည်။
အသက် ၆၄ နှစ်အရွယ် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား မစ္စတာကူးပါးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရင်းနှီးသူတဦးဖြစ်ပြီး EU တွင် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစ၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဝါရင့်သံတမန်တဦးလည်း ဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာပြီး နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ဝင်ထွက်မှုမှာ ဆက်တိုက် ဆိုသလို ဖြစ်လာပြီး ယင်းအနက် EU အဖွဲ့ဝင် ဂျာမနီ၊ အီတလီနှင့် ပိုလန် နိုင်ငံတို့လည်း သီးခြားစီ ပါဝင် သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် လေးကြိမ်မြောက် မဲခေါင်ဒေသ ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက်လည်း တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ကျားပေါင်နှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စစ်ယင်လတ် ရှင်နာဝါထရာတို့လည်း လာရောက်ဦးမည် ဖြစ်သည်။
နာဂစ်တိုက်ပြီးတော့လမ်းမတွေပေါ်လဲကျနေတဲ့ သစ်ပင်တွေ အပျက်အစီးတွေကို စပြီးရှင်းပေးတာ သာဓုကန်ကျောင်းတိုက်က ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးနဲ့ တပည့်သံဃာတွေ...
နာဂစ်တိုက်ပြီးတော့ ကြည့်မြင်တိုင်တခွင်မှာ လမ်းမတွေပေါ်လဲကျနေတဲ့ သစ်ပင်တွေ အပျက်အစီးတွေကို
စပြီးရှင်းပေးတာ သာဓုကန်ကျောင်းတိုက်က ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးနဲ့ တပည့်သံဃာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်. . .
တခြားဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှ လူထုကို ကူညီဖို့ပေါ်မလာကြပါဘူး ။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကျောင်းတိုက်နဲ့
အခြားကျောင်းတိုက်တွေက သံဃာတွေရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့်သာ လမ်းတွေပွင့်ပြီး သွားလာလို့ ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ကြည့်မြင်တိုင်လူထုကတော့ ဆရာတော်ကြီးကို အတော်ပဲ ကြည်ညိုကြပါတယ် ။ဆရာတော်ကြီးဟာ
လူမှုရေးကူညီလိုစိတ် အရမ်းပြင်းပြတယ် ။ နာဂစ်ဒုက္ဓသည်တွေအတွက် နှစ်နဲ့ချီပြီး အကူအညီတွေထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်
ရွှေညဝါ ဆရာတော် မထွက်ခွာရစေရန် ရဟန်းတော်များ၊ဒကာ၊ဒကာမတွေက စုပေါင်း၍ အသနားခံ တောင်းပန်လျှောက်ထားလွှာ ထောက်ခံချက် လက်မှတ်များခေါင်းစဉ်ဖြင့်သာဓု ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှာရှိတဲ့ ရဟန်းတော်၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက်သူ၊ရပ်ကွက်သားများ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်စုပေါင်း၍ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ အသနားခံ တောင်းပန်လျှောက်ထားလွှာ ထောက်ခံချက်စာရွက်များကို မ.ဟ.န ဆရာတော်များအပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများကို ပေးပို့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ည ၁၀ နာရီခွဲတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးတာကို ရပ်နားထားပြီး ၁၆ ရက်နေ့ မနက် ၆နာရီခွဲခန့် စတင်၍ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သာဓု ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက် ဒုတိယတိုက်အုပ်ဆရာတော် ဦးသူရိယကို ဘားမားဗီဂျေမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
Interview to UThuRiYa about sign for ShweNyaWar Presiding Monk by Zar Ne
ညီသစ် | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၄ မိနစ်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် အနော်ရထာ လမ်းထောင့်တဝိုက်ရှိ တရားမဝင် နိုင်ငံခြားငွေ အရောင်းအဝယ်လုပ်သူ ပွဲစားများသည် ယခုကာလအတွင်း အဖွဲ့လိုက် ပူးပေါင်း၍ လိမ်လည်မှုများ သိသိသာသာ လုပ်လာကြကြောင်း ယခုလအတွင်း လိမ်လည် ခံခဲ့ရသူများထံမှ သိရသည်။
“အဲဒီလို လိမ်တာက နှစ်ယောက်ကနေ လေး၊ ငါးယောက်လောက် စုပေါင်းလုပ်တာ။ ငွေလဲမယ့်သူ လာပြီဆိုရင် အစိုးရ ငွေလဲပေါက်ဈေးထက် ပိုပြောပြီး ရောင်းဖို့ ဝိုင်းပြောကြတယ်။ ရောင်းမယ့်သူလာတော့ အတင်းဝိုင်းညှပ်ပြီး ဘယ်လောက်လဲမှာလဲပေါ့။ ဥပမာ အစိမ်းတရာ ရောင်းမယ်ဆိုရင် အစိုးရဈေးက ၇၈၅ ဆိုရင် သူတို့က ၈ဝဝ လောက်
ပေးမယ်ပေါ့။ တကယ်တမ်းကျတော့ ရောင်းမယ်လည်းလုပ်ရော ရှစ်သောင်း မပြည့်တော့ပဲ ခုနှစ်သောင်းခွဲတို့၊ ခုနှစ်သောင်းနှစ်ထောင်တို့ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ရဲလာပြီ ဖမ်းတော့မယ်ဆိုပြီး မြန်မြန် လက်ထဲကို ငွေထုတ်ထည့် ပြေးတာ” ဟု နိုဝင်ဘာ ဒုတိယပတ်အတွင်းက ငွေခုနှစ်ထောင်ခန့် လိမ်လည်ခံခဲ့ရသူတဦးက ပြောသည်။
ယင်းသို့ အုပ်စုဖွဲ့ လိမ်လည်ရာ၌ နိုင်ငံခြားသားများကိုပင် လိမ်လည်မှုများ ရှိပြီး လိမ်လည်ရာ၌ လက်လှည့်နည်း သုံး၍ ငွေရေပြကာ လိမ်လည်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ လိမ်လည်သူများမှာ လက်ချောင်းများ အတွင်း ခေါက်နည်းမျိုးစုံ
ဖြင့် အပြန်အလှန်ခေါက်ကာ ငွေရေတွက်ခြင်းအား ကျွင်းကျင်သူများဖြစ်ပြီး တဦးနှင့် တဦးလည်း ကူညီပေးတတ် သည်ဟု သိရသည်။
“တယောက်က ငွေရေနေပြီဆိုရင် ကျန်တဲ့သူတွေက လာရောင်းသူကို တခြားကိစ္စတွေနဲ့ အာရုံလွှဲတယ်။ ဥပမာ ဒီအရွက်က ဟောင်းနေပြီတို့၊ ဒီဟာလေးကို သူတို့မလို့ ယူတာတို့ ဘာတို့၊ ရဲဖမ်းမှာစိုးလို့ မြန်မြန်လုပ်ရတာဆိုပြီး ဝိုင်းပြောကြတော့ ရောင်းတဲ့သူအာရုံက ငွေရေနေတာကို မရောက်တော့ဘူး။ အဲဒီမှာ ငွေပါကုန်တာပဲ။ ကိုယ်လည်း
ရေနေရော သူတို့က ရဲလာပြီဆိုပြီး ပြေးကြရော” ဟု ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူက ပြန်ပြောပြသည်။
ယခင်က ရန်ကုန်မြို့တွင် တရားဝင် နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ရေး ကောင်တာများ မရှိသဖြင့် ထိုနေရာများတွင်သာ
ငွေလဲလှယ်ကြလေ့ရှိပြီး အများအားဖြင့် အမေရိကန်နှင့် စင်္ကာပူဒေါ်လာများကို အများဆုံး အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်
သို့သော် ယခုအခါ တရားဝင်ငွေ လဲလှယ်ကောင်တာများ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အတွက် လာရောက် လဲလှယ်သူ နည်းပါးမည်ဟု ယူဆရဖွယ်ရှိသော်လည်း ငွေလဲလှယ်သူများနှင့် စည်ကားဆဲဖြစ်သည်ဟု လိမ်လည်ခံခဲ့ရသူထံမှ သိရသည်။
အစိုးရငွေလဲလှယ်ကောင်တာများ ရှိသော်လည်း နိုင်ငံခြားငွေများကို စစ်ဆေးလွန်းပြီး အစွန်းအထင်း အနည်းငယ် ပါပါက လက်မခံသည့်အတွက် လဲလှယ်လိုသူများ အခက်တွေ့ကာ ပြင်ပရှိ တရားမဝင် ငွေလဲပေးသည့် ပွဲစားများထံ
ရောက်ရှိရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယခုအပတ်ထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ၌ တိုင်တန်းထားသည်။
ကျပ် ခုနှစ်ထောင်ခန့် လိမ်လည်ခံရသူမှာ ပမာဏာ အနည်းဆုံးဟု ဆိုနိုင်ပြီး ယင်းထက်ပိုကာ ကျပ်သောင်းနှင့်ချီ အလိမ်ခံရသူများလည်း ရှိကြောင်း ယင်းအယ်ဒီတာထံပေးစာတွင် ပါရှိသည်။
အာရ်အက်ဖ်အေက အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ လူထုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်အတွက် သောတရှင်တစ်ဦးရဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေက ထုတ်ပြန်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စာရင်းတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အရေအတွက် ကွဲလွဲနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ တခြားမေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေကြားရာမှာ ပါတီဝင်ဟောင်းတွေကို ဘယ်လိုမူချ ပြန်လည် စိစစ်လက်ခံမယ်ဆိုတာ အင်န်အယ်လ်ဒီက မကြာခင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အဲဒီစာကို ၁၃ ရက် ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ ဆရာတော်ဆီ ပို့လိုက်တယ်လို့ ဆရာတော်ရဲ့ ဒါယကာ ဒါယိကာမ အသိုင်းအဝန်းကတစ်ဆင့် သိရပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ရွှေညဝါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ တရားဟောတဲ့ ကိစ္စကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဆဋ္ဌမအကြိမ် နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက စုံညီအစည်းအဝေးကနေ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ရေးသားထားပြီး ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၃ ချက်ကို စာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆရာတော်ကို သာဓုကျောင်းကနေ ဖယ်ရှားဖို့၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်ရဲ့ ဆုံးမညွှန်ကြားတာကို မလိုက်နာတဲ့အတွက် ဒုဗ္ဗစပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သာဓုကျောင်းမှာ ဘယ်လိုသင်တန်းမှ ဖွင့်လှစ်ခွင့်မပြုဖို့ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါ။ ဒုဗ္ဗစပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ပြောဆိုဆုံးမလို့ခက်ခဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တာကြောင့် အခုလို ရွှေညဝါဆရာတော်ကို ဒုဗ္ဗစပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်တာဟာ နိုင်ငံအကျိုး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဆရာတော်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မလျော်ကန်တဲ့အကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ဦးဆောင် ဆရာတော် ဦးပညာဇောတက မိန့်ကြားပါတယ်။ ရွှေညဝါဆရာတော် ဦးပညာသီဟဟာ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီမှာ နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်းမော် ဆရာတော်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ မိမိသီတင်းသုံးရာကျောင်းမှာ နိုင်ငံရေး အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ လက်ခံလေ့ရှိသလို ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့ တရားဟောလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရရှိခြင်း အနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ရွှေညဝါဆရာတော် သီတင်းသုံးတဲ့ သာဓုကျောင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေး NLD ရုံးမှာ တရားဟောခဲ့တဲ့အတွက် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့က အရေးယူမယ်လို့ စာရေးသား မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ထံ ပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့ စာရေးသား လျှောက်ထားမယ့် အကြောင်းကို ဆရာတော်ထံ လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလျှောက်ထားချက်ကို ဆရာတော် ဦးပညာသီဟက သံဃာ့နည်းလမ်းနဲ့သာ ဖြေရှင်းလိုသေးတယ်လို့ ပြန်လည် မိန့်ကြားကြောင်း အာအက်ဖ်အေကို မိန့်ပါတယ်။ ရွှေည၀ါ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ ထံ ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက အန်အယ်လ်ဒီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး နဲ့ ဒေါက်တာ ဒေါ်မေဝင်းမြင့်တို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး လျှောက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ ဟာ သူ့အနေနဲ့ မန္တလေး အန်အယ်လ်ဒီရုံးမှာ တရားဟောတာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဥပဒေကို လေးစားကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့တယ်လို့ မိန့်ကြားပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ငါးပါးမမှောက်ကြပါစေနဲ့ ဆိုတဲ့တရား ဟောခဲ့တဲ့အတွက် တစ်နှစ်တိတိ တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ခံထား ရတာဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ရောက်မှသာ ပိတ်ပင်မှုကနေ ကင်းလွတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေညဝါဆရာတော်ကို အာအက်ဖ်အေ ဝိုင်းတော်သား ဦးဝင်းနိင် လျှောက်ထားမေးမြန်းခဲ့တာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
NLD ပါတီနှင့် ရွှေညဝါဆရာတော် ဘုရားအပေါ် တခြားသံဃာတွေရဲ့ အမြင်တွေကို ဦးဉာဏ်ဝင်းအောင် တင်ပြထားတာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ရွှေညဝါဆရာ​တော် ဖိအား​ပေး​ခံရသည့်​ကိစ္စ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည် စိုး​ရိမ်
Published on December 15, 2011 by နေသွင် · No Comments
ရန်ကုန်တိုင်း​၊​ ကြည့်​မြင်တိုင်မြို့​နယ် ​ရွှေညဝါဆရာ​တော်ကို ​ကျောင်း​က​နေ ဖယ်ရှား​ပြီး​ ​ကျောင်း​က သင်တန်း​တွေကိုလည်း​ ခွင့်​မပြု​တော့​တဲ့​အ​ကြောင်း​ သံဃာမဟာနာယကအဖွဲ့​က ညွန်ကြား​ထား​ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့​ပတ်သက်လို့​ ဆရာ​တော်အတွက် စိုး​ရိမ်တဲ့​ တပည့်​၊​ ဒကာ​တွေက ဒီ​နေ့​မနက်မှာ ဆရာ​တော့်​ကျောင်း​မှာ စုရုံး​ခဲ့​ကြပြီး​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် ဦး​တင်ဦး​ကလည်း​ အဖွဲ့​ချုပ် ကိုယ်စား​ သွား​ရောက် ညှိနှိုင်း​ခဲ့​ပါတယ်။
ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ကိုယ်တိုင်း​လည်း​ ဒီကိစ္စနဲ့​ပတ်သက်လို့​ စိုး​ရိမ်မှုရှိ​နေတဲ့​အ​ကြောင်း​ အ​ကြောင်း​ ဦး​တင်ဦး​က ​ပြောပြပါတယ်။
ဒီသတင်း​ကို မ​နေ့​ညမှာ ကြား​သိရပြီး​တဲ့​နောက် အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် ဗဟို​ကော်မတီဝင်​တွေ ဒီ​နေ့​ မနက်က ဗဟို​ကော်မတီအစည်း​အ​ဝေး​မှာ အ​ရေး​တကြီး​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​တယ်လို့​ ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦး​တင်ဦး​က ​ပြောပါတယ်။
အစည်း​အ​ဝေး​ကို ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်လည်း​ တက်​ရောက်ပြီး​ ပြဿနာကို ငြိမ်း​ငြိမ်း​ချမ်း​ချမ်း​နဲ့​ ​ပြေလည်သွား​ဖို့​ နည်း​လမ်း​ရှာခဲ့​ဖို့​ သူ့​ကို တာဝန်​ပေး​လိုက်တဲ့​ အ​ကြောင်း​ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦး​တင်ဦး​က ​ပြောပါတယ်။
“ကျ​နော်တို့​ သွား​ပြီး​တော့​ ​လျှောက်ထား​ချင်တာက​တော့​ သံဃာ့​မဟာနာယကအဖွဲ့​ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့​ ဗန်း​မော်ဆရာ​တော်ဘုရား​ကြီး​ကိုလည်း​ ​လျှောက်ထား​ချင်တာ​ပေါ့​ဗျာ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ခက်တာက သံဃာ့​မဟာနာယကအဖွဲ့​နဲ့​ကလည်း​ပဲ ကျ​နော်တို့​အဖို့​က သိပ်ပြီး​တော့​ မနီး​စပ်ဘူး​ခင်ဗျ။ တခါမှလည်း​ ကျ​နော်တို့​က ဆက်စပ်မှုလည်း​ ဆက်သွယ်မှုလည်း​ မရှိခဲ့​တော့​ ဒီလို​တော့​ ရှိတာ​ပေါ့​နော်။ သို့​သော်လည်း​ပဲ ကျ​နော်တို့​က​တော့​ သပိတ်အိုင်ဆရာ​တော် ဘုရား​နဲ့​က​တော့​ ဒကာမကြီး​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့​က​တော့​ အင်မတန်ကိုပဲ ဆရာဒကာလို ဖြစ်​နေပြီဗျ။ အဒါ​ကြောင့်​မို့​လို့​ အဲဒီဟာကို ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်က တာဝန်​ပေး​တယ်။ ဒီဥစ္စာကို ​အေး​အေး​ချမ်း​ချမ်း​ ​ပြေ​ပြေလည်လည် ​ဆောင်ရွက်နိုင်ဖြစ်​အောင် သပိတ်အိုင် ဆရာ​တော်ဘုရား​ကြီး​ကိုလည်း​ ချည်း​ကပ်ပြီး​တော့​ပေါ့​နော် လိုအပ်တာ​တွေ သူ့​ဆီက ဩဝါဒ​တွေခံယူပြီး​တော့​ ​ဆောင်ရွက်နိုင်​အောင် လုပ်ဖို့​ ကျ​နော် ဒီလို​တော့​လည်း​ စိတ်ကူး​ထား​တယ်ခင်ဗျ။”
ရွှေညဝါဆရာ​တော်ကလည်း​ ဆရာရင်း​ဖြစ်တဲ့​ သံဃာ့​မဟာနယက ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်း​မော်ဆရာ​တော် ဘုရား​ကြီး​ကို ​တွေ့​ဖို့​ရှိတဲ့​အ​ကြောင်း​၊​ သူ့​ကို မိန့်​ကြား​ခဲ့​တယ်လို့​ မနက်က ဆရာ​တော်ကို သွား​ဖူး​ခဲ့​တဲ့​ ဦး​တင်ဦး​က ​ပြောပါတယ်။
တပည့်​၊​ ဒကာ၊​ ဒကာမ​တွေ မပူကြဖို့​ ဆရာ​တော်က တဆင့်​ မှာကြား​ခဲ့​တဲ့​အ​ကြောင်း​လည်း​ ဦး​တင်ဦး​က အခုလို​ပြောပြပါတယ်။
“ဆရာ​တော်ဘုရား​ကြီး​က ​အေး​အေး​ချမ်း​ချမ်း​ ​ဆောင်ရွက်သွား​မယ့်​အ​ကြောင်း​ပေါ့​။ ​ပြောလိုက်လို့​ရှိရင် အကုန်လုံး​ ​ပြေလည်သွား​ နိုင်ပါတယ်တဲ့​။ အဲဒီဟာကို ​ပြေလည်​အောင် အား​လုံး​က ညှိနှိုင်း​ဆောင်ရွက်ပြီး​မှ လုပ်ဖို့​ ​ကောင်း​ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ဆန္ဒ​စောပြီး​တော့​ လုပ်တဲ့​ ကိစ္စမျိုး​ ဖြစ်လို့​ရှိရင် ​ကျောင်း​မှာရှိတဲ့​ သံဃာ​တော်အတွက်ကလည်း​ပဲ မ​ကောင်း​ပါဘူး​တဲ့​။ ​နောက်ပြီး​တော့​ ကိုး​ကွယ်​နေတဲ့​ ဒကာ ဒကာမ​တွေအတွက်လည်း​ အဆင်မ​ပြေရာ ဖြစ်မယ်တဲ့​ ​နောက်ပြီး​တော့​ ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်​နေတဲ့​ ကျ​နော်တို့​ အဖွဲ့​အစည်း​များ​အ​နေနဲ့​လည်း​ပဲ လုပ်ကိုင်​နေတဲ့​ တိုး​တက်​ကောင်း​မွန်​နေတာကိုလည်း​ အထစ်အ​ငေါ့​ဖြစ်မှာ စိုး​တယ်​ပေါ့​ဗျာ။ အဲဒါ​ကြောင့်​မို့​ အစစအရာရာ ပြည်လည်​အောင်အတွက် ဆန္ဒမ​စောဘဲနဲ့​ ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေး​ တိုင်တိုင်ပင်ပင်လုပ်ရင် ​ပြေလည်နိုင်ပါတယ်တဲ့​ ကျ​နော့်​ကိုလည်း​ မှာလိုက်ပါတယ်။ အပြင်မှာ ရှိ​နေတဲ့​ ပြည်သူလူထု​တွေကိုလည်း​ပဲ ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေး​လေး​နဲ့​ ​ပြေလည်ရာ​ပြေလည်​ကြောင်း​ ဖြစ်မယ့်​အ​ကြောင်း​၊​ ကျ​နော်ကပဲ သူတို့​ကို ဒါကို စိတ်ထဲမှာ ဘာမှစိုး​ရိမ်ပူပန်​ကြောင့်​ကြခြင်း​ မရှိ​အောင် ​နေကြပါ၊​ ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေး​ပြန်ကြပါ ​နေကြပါဆိုတာကိုလည်း​ပဲ ​ပြောဆို​ပေး​ခဲ့​ပါဆိုလို့​ ကျ​နော်က ပြည်သူလူထုကို မှာကြား​ပေး​ခဲ့​ပါတယ်။”
မနက်က​တော့​ ကြည့်​မြင်တိုင် ​ရွှေညဝါ​ကျောင်း​တိုက်ကို သံဃာ့​မဟာနယက ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်း​မော်ဆရာ​တော် ကြွ​ရောက်လာမယ်လို့​ သတင်း​ထွက်​နေတဲ့​အတွက် ရဟန်း​နှင့်​ လူနှစ်ရာဝန်း​ကျင် စုရုံး​ခဲ့​ကြတယ်လို့​ ၈၈ မျိုး​ဆက်​ကျောင်း​သား​ ကိုကိုကြီး​ (စမ်း​ချောင်း​) က ​ပြောပါတယ်။
“ကျ​နော့်​အမြင်က​တော့​ ဒီမိုက​ရေစီစနစ်ကို သွား​နေတယ်ဆိုတဲ့​ အ​နေအထား​နဲ့​ နည်း​နည်း​လေး​ လွဲ​ချော်​နေသလိုပဲဗျ။ အခုအချိန်မှာ ဆန္ဒပြခွင့်​ ဥပ​ဒေ​တောင် ပြဋ္ဌာန်း​ပြီး​ပြီဗျာ။ ဒီလိုမျိုး​ ဩဝါဒစကား​ ချီး​မြှင့်​လို့​ အ​ရေး​ယူတယ် ဆိုတာက​တော့​ နည်း​နည်း​လေး​ တခုခု​တော့​ လွှဲ​နေသလိုပဲ​ပေါ့​။ အဲဒါကို ပြန်စဉ်း​စား​သင့်​တယ်​ပေါ့​နော်။ အဲဒီအတွက်​ကြောင့်​လည်း​ ဒီ​လောက် ဖြစ်စရာ မလိုဘူး​လို့​ ကျ​နော်ထင်တယ်​ပေါ့​နော်။ အခုက​တော့​ အား​လုံး​က ငြိမ်း​ငြိမ်း​ချမ်း​ချမ်း​နဲ့​ပဲ ​စောင့်​ကြည့်​နေတယ်။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကိုပဲ ဆက်ပြီး​တော့​ လုပ်​နေကြမယ် အဲဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
ရွှေညဝါ ဆရာ​တော်ကို သံဃာ့​မဟာနာယကပို့​လိုက်တဲ့​ ညွန်ကြား​စာမှာ တရား​ဟောခွင့်​ ပိတ်ပင်ခံထား​ရတဲ့​ ဆရာ​တော်ဟာ နိုဝင်ဘာလအတွင်း​က မန္တ​လေး​တိုင်း​ အမျိုး​သား​ ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်ရုံး​မှာ တရား​ဟောတဲ့​အတွက် အ​ရေး​ယူတာလို့​ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့​ပတ်သက်လို့​ မန္တ​လေး​တိုင်း​ အဖွဲ့​ချုပ်ကို ​မေး​မြန်း​တဲ့​အခါမှာ​တော့​ ဥက္ကဋ္ဌ ဦး​သိန်း​တန်က အခုလိုရှင်း​ပြပါတယ်။
“ဆရာ​တော် ကျ​နော်တို့​ဆီမှာ လာ​ပြောတာက​တော့​ ဝါး​ပင်​လေး​တွေအ​ကြောင်း​ကို သူ​ပြောသွား​တယ်။ ဝါး​ပင်များ​ဟာ ​လေယူရာ ယိမ်း​ပေမယ့်​ ဘယ်​လောက်ထိခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့​အ​ကြောင်း​၊​ စည်း​လုံး​ညီညွတ်မှုရှိတဲ့​အ​ကြောင်း​၊​ နိုင်ငံ​ရေး​ သိပ်မပါဘူး​ဗျ။ ​ပြောတဲ့​ ​ဟောတဲ့​အထဲမှာ ဘာတခုမှ ​ဘောင်လွတ်တာမပါဘူး​ဗျ။”
မ​နေ့​ည​နေပိုင်း​က ဒီဗွီဘီက ​မေး​မြန်း​လျှောက်ထား​တဲ့​အချိန်မှာလည်း​ ​ရွှေညဝါဆရာ​တော်က ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ကို လိုလား​တဲ့​ သံဃာတပါး​အ​နေနဲ့​ ငြိမ်း​ငြိမ်း​ချမ်း​ချမ်း​ပဲ ​ဖြေရှင်း​ချင်တဲ့​ ဆန္ဒရှိတယ်လို့​ မိန့်​ကြား​ခဲ့​ပါတယ်။